ကျင့်ဝတ်နှင့်အ Theist ကြည့်ရန် vs. ငျြ့တရားဘုရားမဲ့ဝါဒီ
ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် theists မကြာခဏအများအပြားအဆင့်ဆင့်အပေါ်စာရိတ္တငြင်းခုံ: အဘယ်သို့သောအ ကငျြ့တရား၏မူလအစ , သငျ့လျြောသောကိုယ်ကျင့်တရားအပြုအမူတွေကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ, ဘယ်လိုကငျြ့တရားကငျြ့တရား၏သဘောသဘာဝကားအဘယ်သို့, သှနျသငျထားရမည်, etc အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များကိုကျင့်ဝတ်နှင့်အကငျြ့တရားကိုမကြာခဏအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုကြသည်နှင့်ဆိုလိုနိုင်ပါတယ် ကျင့်ဝတ်ထိုကဲ့သို့သောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အမူအကျင့်၏တရားဝင်လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းနေစဉ်ပေါ့ပေါ့စကားပြောဆိုမှုအတွက်တူညီပေမယ့်တစ်ဦးထက်ပိုသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ကငျြ့တရားအပေါ်ကိုယ်ကျင့်တရားစံချိန်စံညွှန်းများသို့မဟုတ်အကငျြ့ကိုရည်ညွှန်းသည်။
theists အဘို့, စာရိတ္တပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး function ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်တပါးသောဘုရားများနှင့်ကျင့်ဝတ်ကနေကြွလာ ဘာသာရေး ; ဘုရားမဲ့ဝါဒီများအတွက်, ကငျြ့တရားအဖြစ်မှန်၏သဘာဝ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်လူ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျင့်ဝတ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီကျင့်ဝတ် & ငျြ့တရားဂရုစိုကျသငျ့သလော
ကိုယ်ကျင့်တရားဒဿန၏အခြေခံနှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောဘုရားမဲ့ဝါဒီ theists နှင့်အတူစာရိတ္တနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆွေးနွေးရန်ပြေးလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီကငျြ့တရား၏တည်ရှိမှုတစ်ခု, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းကငျြ့တရားထဲမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသက်သေထူသောအရေးဆိုရန်ဥပမာ, ကိုတုံ့ပြန်နိုင်လိမ့်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏အခြေအနေတွင် ။ အချို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီဘာသာရေးနှင့် theistic ယုံကြည်ချက်လူ့ကိုယ်ကျင့်တရားအသိမှနောက်ဆုံးတွင်ထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းငြင်းသောကြောင့်, ကျင့်ဝတ်လည်းဘာသာရေး theism ၏ဘုရားမဲ့ဝါဒီ '' ဝေဖန်မှုများအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်; ထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုများသဘာဝနှင့်သဘာဝလွန်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစနစ်များအကြားခြားနားချက်များကိုနားလည်ခြင်းမရှိဘဲ, သို့သော်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်မရပါ။
Theist ငျြ့တရား vs. ဘုရားမဲ့ဝါဒီငျြ့တရား
အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများ ကငျြ့တရား၏ဘုံတှငျဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် theists ဖော်ပြရန်ကျင့်ဝတ်: ကိုယ်ကျင့်တရားဒဿန၏သုံးခုကိုအဓိကကွဲပြားမှုကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ပေါ် စံတန်ဖိုးကျင့်ဝတ် များနှင့် metaethics ။
တစ်ခုချင်းစီကိုအရေးပါသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားအတွက်ချဉ်းကပ်ရမည်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးဆွေးနွေးငြင်းခုံနေတဲ့ metaethical မေးခွန်းကိုပြန်လာ: ပထမဦးဆုံးဌာန၌ကျင့်ဝတ်များအတွက်အခြေခံသို့မဟုတ်အခြေခံကဘာလဲ? ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် theists အခြားအမျိုးအစားများအတွက်ကျယ်ပြန့်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာဝေးလျော့နည်းသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်ဘုံမြေပြင်ရှိသေး၏။ ဒါကကိုထင်ဟပ် ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် theists အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံ ယေဘုယျအားဖြင့်ယုံကြည်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောမြေပြင်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အကြောင်းပြချက်များအကြားပဋိပက္ခကျော်။
ဖော်ပြရန်ကျင့်ဝတ်ကလူပြုမူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့နောက်လိုက်ဖို့တောင်းဆိုသည့်ကိုယ်ကျင့်တရားစံချိန်စံညွှန်းကိုဘယ်လိုဖော်ပြပါဝငျသညျ။ ဖော်ပြရန်ကျင့်ဝတ်ကိုယ်ကျင့်တရားစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်ချက်နားလည်ရန်မနုဿဗေဒ, စိတ်ပညာ, လူမှုဗေဒနှင့်သမိုင်းမှသုတေသနထည့်သွင်း။ ဘာသာရေး theists ကိုယ်ကျင့်တရားအပြုအမူဒါမှမဟုတ်သူတို့အမှန်တကယ်စနစ်တကျမိမိတို့၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များနှစ်ဦးစလုံးကိုဖော်ပြရန်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်လိုအပ်ဘယ်လိုပြုမူဆန့်ကျင်စာရိတ္တများအတွက်အခြေခံအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောသည်ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့သူဘုရားမဲ့ဝါဒီ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကျင့်တရားဒဿနခုခံကာကွယ်ဖို့, ဘုရားမဲ့ဝါဒီတိကျစွာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစံချိန်စံညွှန်းများအဖြစ်သူတို့လုပ်ကိုယ်ကျင့်တရားရွေးချယ်မှု၏သဘောသဘာဝကိုရှင်းပြဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ပါတယ်။
စံချိန်စံညွှန်းများကျင့်ဝတ်ကိုယ်ကျင့်တရားစံချိန်စံညွှန်းကိုသို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ကပါဝင်ပတ်သက်, ဒါကြောင့်လူဟာလက်ရှိကိုယ်ကျင့်တရားအပြုအမူကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှိမရှိပြုပါသို့မဟုတ်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုထွက်တွက်ဆရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ အစဉ်အလာ, အများဆုံးကငျြ့ဝတျအတွေးအခေါ်စံတန်ဖိုးကျင့်ဝတ်ပါဝင်ထားပါတယ် - အနည်းငယ်ဒဿနပညာရှင်သူတို့ကလူပြုပါအဘယ်ကြောင့်သင့်တယ်ထင်သောအရာကိုရှင်းပြမှာသူတို့လက်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ မကြာခဏအနေနဲ့စွပ်စွဲဘုရား၏ပညတ်တို့ကိုအပေါ်အားကိုးဘာသာရေး, theistic စံတန်ဖိုးကျင့်ဝတ်, ဘုရားမဲ့ဝါဒီများအတွက်, စံတန်ဖိုးကျင့်ဝတ်သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ နှစ်ခုအကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ, အရှင်မကြာခဏစာရိတ္တများအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေခံသင့်လျော်သောကိုယ်ကျင့်တရားအပြုအမူဖြစ်သင့်သောအရာကိုသလောက်သောအရာကိုတစ်ဝှမ်း revolve ။
analytic ကျင့်ဝတ် (Metaethics)
ထို့အပြင် metaethics ကိုခေါ် analytic ကျင့်ဝတ်, အဲဒါကိုအစားစံချိန်စံညွှန်းကျင့်ဝတ်အောက်မှာထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းငြင်းခုံတစ်ခုလွတ်လပ်သောလိုက်စားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းသဘောမတူသူအချို့ဒဿနပညာရှင်များကအငြင်းပွားနေပါတယ်။ နိယာမမှာတော့ metaethics စံတန်ဖိုးကျင့်ဝတ်တှငျပါဝငျသညျ့အခါကလူလုပ်ယူဆချက်၏လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောယူဆချက်တပါးသောဘုရားတို့၏တည်ရှိမှု, ကျင့်ဝတ်ဆို၏အသုံးဝင်မှု, အပါဝင်နိုင်ပါသည် အဖြစ်မှန်၏သဘောသဘာဝ ကငျြ့တရားတဲ့ဘုရား၏တည်ရှိမှု metaethical အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိကျော်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် theists အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများစသည်တို့ကို, ကိုယ်ကျင့်တရားထုတ်ပြန်ချက်များကမ္ဘာကြီးကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိ, ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။
အားဖြင့် Nicomachean ကျင့်ဝတ်, အရစ္စတိုတယ်
အသုံးပြုပုံကောင်းနှင့်ဘေးဥပဒ်ကျော်လွန် တွင် Friedrich နစ်ရှေး
တခါတရံမကငျြ့ဝတျအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများတငျပွထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ဆိုအကြားခွဲခြားရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကငျြ့တရား၏သဘောသဘာဝငြင်းခုံမယ့်နေတယ်ဆိုရင်, သို့သော်သင်ခြားနားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြကိုဖျောပွရာထုတ်ပြန်ချက်များအချို့ကိုဥပမာနေသောခေါင်းစဉ်:
သူဟာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ - သူကောင်းကောင်းကလူဆကျဆံဘယ်တော့မှနှင့်မည်သူမဆိုလေးစားမှမထင်ထားဘူး။
ကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူသင့်ပါတယ်, ကောင်းမကောင်း, ်၏တူသောစကားအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောစကားများမျှသာအသွင်အပြင်ကျနော်တို့အလိုအလျှောက်ကိုယ်ကျင့်တရားအကြောင်းကြေညာချက်ရှိသည်မဆိုလိုပါ။ ဥပမာ:
ဥပမာအားဖြင့် #4အခြားသူတွေဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြကိုဖော်ပြရန်ဘူးပေမယ့်အထက်ပါအဘယ်သူအားမျှ, ကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် #5တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဗေဒ #6ရိုးရှင်းစွာအခြို့သောရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြတဲ့ Prudential ကြေညာချက်သည်ကာလတွင်တရားသဖြင့်စီရင်။
စာရိတ္တ၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်ကလူတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုများအတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုကြောင့်, ကငျြ့ဝတျတရားစီရင်ပိုင်ရွေးချယ်မှုပါဝင်သောလုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ထားကြပါတယ်ကြောင်းထောက်ပြဖို့လိုအပ်ပေသည်။ လူတွေကအဲဒီလုပ်ရပ်တွေကငျြ့တရားကောငျးမှသို့မဟုတ်ငျြ့တရားမကောင်းတဲ့ဖြစ်စေဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချကြောင်း၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များမှဖြစ်နိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာရှိတဲ့အခါမှသာတကဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရား၏တည်ရှိမှုအခမဲ့အလိုတော်၏တည်ရှိမှုနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအတွက်မဆိုစစ်မှန်သောရွေးချယ်မှုရှိသည်နှင့်, ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားတာဝန်ခံကျင်းပမရနိုငျသောကွောငျ့ဤသည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် theists အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ။
တစ်ဦး '' Nontheist '' အကြားခြားနားချက်နှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီ
Ayn Rand, လူမှုဖူလုံရေးဘုရင်မကြီး: အစိုးရကူညီစောင့်ရှောက်ရေးတွင်မြင့်မားသော Living?
ယုံကွညျခွငျးနှငျ့ Theism, ဘာသာရေး, ဘုရားမဲ့ဝါဒအကြားဆက်သွယ်မှုကို
'' After.Life '' ရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သုညမှသူရဲကောင်းများ: ဘေ့စဘောကမ္ဘာ့ဖလားစီးရီးခွက်အရှကျကှဲခန်းမ Shot
အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမ 1890 သန်းခေါင်စာရင်းရှိပါသည်?
အဆိုပါ Beginner ထူးခြားသောအဘို့အဂီယာ & ပစ္စည်း
အဆိုပါ Underprivleged နှင့်ညံ့ဖျင်းသောအဘို့ဆုတောင်းပဌနာ
တဦးတည်း Term အမေရိကန်သမ္မတ
ကုံမွန်း (Transit) - အဆိုပါ Mood နှင့်ဖြစ်ပျက်
စပိန်အတွက် '' Mas Que '' vs. '' Mas De '
ဒေါက်တာ Josef Mengele သည်အော့ဇျဝ "မရဏ၏အိန်ဂျယ်" အကြောင်း 10 အချက်အလက်
စင်ကြောက်စိတ်ကိုအောင်နိုင်ဖို့7သိကောင်းစရာများ
အချိန်တစ် Little ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါဝငျ4အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ဒွန် Pasquale ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသောက် supplements ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Monster Lo-Carb စွမ်းအင်သောက်ဆန်းစစ်ခြင်း
Programmer နှင့်ရေးသားသူ Certificate
အားလုံးအဖြူရောင်ရေနံနှင့် acrylic အဆိုတော်များ '' သုတ်ဆေးအကြောင်း
အဆိုပါ Beatles သီချင်းများ: "ငါသင်၏လက်ကိုကိုင်ထားပါစေချင်"